Telegram | OROMIASAMSUNG
Barnoota Telegram kutaa 8ffaa – waa’ee Bot baradhu
abdulwasi	 Oct 11, 2020 0
Telegram irratti Bot faayyadamuun Appii playsore fi website kamirraayyuu jiru buufachuu fi suuraa barreeffama qabu irraa barreeffama isaa qofa karaan ittiin fudhachuu dandeenyu. 1. Bot Appii barbaadne ittiin buufannu Appii update…
Barnoota Telegram kutaa 7ffaa – waa’ee Bot bardhu
abdulwasi	 Oct 9, 2020 1
Bot telegramaa faayyadamuun jecha kamiiyyuu gara afaanota addunyaa irra jiranitti hiikuu akka itti dandeenyu fi odeeffannoo dhibee koroonaa biyya keessaa ittiin argannu. Barannoo kana keessatti bot lamaa fi faayyadama isaanii kan…
Barnoota Telegram kutaa 6ffaa – waa’ee Bot baradhu
abdulwasi	 Oct 3, 2020 1
Barntoota Telegram kutaa 6ffaa kana keessatti kan ilaallu; Bot Youtube irraa vidiyoo buusuBot vidiyoo sagaleetti jijjiiree nuuf buusuAkkasuma Bot Facebook irraa vidiyoo ittiin buufachuu dandeenyu Akkuma beekamu Data faayyadamuun…
Sensor maali? Faayidaa akkamii qaba?
abdulwasi	 Sep 27, 2020 0
Sensor'n qaama elektirooniksii ta’ee jijjiirama naannoo tokkoo beekuu fi safaruu kan danda'uudha. Dabalees jijjiirama sana adda baasee deebii kennuu kan danda'uudha. Akkuma namni qaama miiraa qabu meeshaan elektirooniksiis qaama miiraa…
Barnoota Telegram kutaa 5ffaa – waa’ee Bot baradhu
abdulwasi	 Sep 24, 2020 2
Barnoota Telegram kutaa 5ffaa kana keessatti kan ilaallu: Maalummaa 'Bot' Faayidaa isaa Akkaataa itti 'Bot' dhuunfaa keenyaa uummachuu dandeenyu. Bot jechuun gabaabumatti qaama sadaffaa Telegramaa fi fayyadamtoota telegraamaa…
Karoota sadiin passwordi Facebook keessanii isin jalaa itti hatamu
abdulwasi	 Sep 20, 2020 1
Warri Facebook namaa hatu maloota ijoo asii gadii 3'n keessaa tokko faayyadama. isin ammoo sadeenuu sirritti hubadhaa irraa of tiksaa. 1. Mala Hawaasummaa (Social Engineering) Malli kun salphamatti dadhabina keessanitti faayyadamuun…
Barnoota Telegram kutaa 4ffaa
abdulwasi	 Sep 15, 2020 0
Hedduun keenya telegraama kan faayyadamnu ergaa namaaf erguu fi fudhachuu qofaafi. Haa ta’uu malee telegraamni qabiiyyee gaarii namoonni baay’een hin beekne of keessaa qaba. Barnoota Telegram kutaa Afraffaa kana keessatti Qabiiyyee…
abdulwasi	 Sep 9, 2020 2
Appii Telegraamaa isa kam yoo fayyadamne gaariidha? Garaagarummaa akkamii qaba? Appiin telegraamaa gosa hedduutu jiru. isaan keessaa Telegram, Telegram plus, mobo plus, mobogram, fastgram, vido plus, Telepro (saffisni garuu xiqqaadha),…
abdulwasi	 Aug 31, 2020 0
Telegraama yeroo faayyadamnutti yoomeessaawwan (settings) gaarii ta'an fi akkasuma dhoksaawwan faayidaalee hedduu qaban ni jiru. kanaaf kuataa kana keessatti baay'ee barbaachsioo kan ta'an filannee ilaalla. 1. Username uummachuu …
Barnoota Telegram Kutaa 1ffaa
abdulwasi	 Aug 24, 2020 0
Waa'ee telegramaa hangam beektu? Teelegraamni tajaajila yoom jalqabe? Miidiyaalee hawaasaa kan biroorraa maaltu adda isa godha?Teelegraamni kan tajaajila jalqabe 2013 G.C yoo ta’u, namoota lama Nikolai fi Pavel Durov jedhamaniin kan…